Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande; “Karim Benzema ma ahan Tusaale wanaagsan” – Gool FM
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande; “Karim Benzema ma ahan Tusaale wanaagsan”
Haaruun October 17, 2016
(Paris), 17 Okt 2016 –Iyadoo weli Tababaraha Xulka Qaranka Faransiiska, Didier Deschamps uu ka dhega adeygayo in uu xulka dib ugu soo celiyo Weeraryahankii hore ee Faransiiska Karim Benzema ayaa haddana waxaa Benzema culeyska ku sii siyaadiyay hadal ka soo yeeray Madaxweynaha Waddanka Faransiiska, Francois Hollnande.
Benzema iyo Valbuena ayaa xulka uga maqan kaddib cajal anshax darro ah oo la sheegay in laga duubay, waxaana Madaxweyne Hollande uu buuggiisa cusub ee uu qoray ee la magac baxay ‘A President Shouldn’t Say That’ – ‘Madaxweyne waa inuusan sidaa oran’ uu ku sheegay in Benzema uu yahay mid akhlaaq xun oo aan lagu dayan karin.
Buuggani muranka badan dhaliyay ee “Un président ne devrait pas dire ça” ayaa waxaa sidoo kale uu Hollande ku cambaareeyay ciyaartoyda kubadda cagta Faransiiska oo idil isagoo ku tilmaamay kuwo u baahan in la siiyo tababarro xagga maskaxda ah halka haatan dhinaca murqaha laga tababaro, isagoo xusay inay yihiin kuwo jaahiliin ah oo nolol adag ku soo koray isla markaana mar qura helay lacago xad dhaaf ah.
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane oo ahaa laacibkii hore ee Faransiiska u horseeday Koobkii Adduunka 1998 ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska isla markaana ay dhibayso inuu maqlo hadalladaasi oo kale, balse waxa uu ka gaabsaday in intaa ka badan uu ka hadlo .
Saddex Nin oo loo xiray Rasaastii ay ku dhimatay Gabadhii Orodyahan Tyson Gay
Banaadir oo xasuuqday Gantaalaha Afgooye iyo Heegan oo dhib la’aan uga badisay Somali Fruit.